MB 2016 Novambra - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Suisse
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2016 Novambra
Izay rehetra mahalala ahy dia mahalala fa olona fatratra ny toetran'ny mpivavaka amin'ny Sherlock Holmes aho. Manana lahatsoratra mpankafy an'i Holmes bebe kokoa aho raha te hanaiky ny tenako. Nitsidika ny Museum Museum Sherlock Holmes aho tamin'ny 221b Baker Street any Londres. Ary mazava ho azy Tiako ny mijery ireo sary maro mahaliana natao momba an'io toetra mahaliana io. Manantena manokana aho ny fizotran'ny fizarana farany BBC farany, izay anaovan'ny sarimihetsika Benedict Cumberbatch ny sarimihetsika malaza, mpanoratra tantara an-tsary nataon'i Sir Arthur Conan Doyle.
Ny tantara voalohany momba ireo andian-tantara be dia be dia navoaka tamin'ny 1887. Ie - Sherlock Holmes - ny mpitsikilo master ho an'ny raharaha sarotra indrindra dia efa ho 130 taona izay. Na dia mbola tsy nahita ny sarimihetsika amin'ny fahitalavitra aza ianao ary tsy namaky ny bokin'i Sir Arthur Conan Doyle, dia manantena aho fa mbola mahalala zavatra na roa momba ny Sherlock Holmes ianao. Satria mety ho hainao fa mpamily izy ary mamaha ireo raharaha tsy misy dikany amin'ny fomba madiodio. Mazava ho azy fa fantatrao koa ny namany Dr. Watson, izay manampy amin'ny tranga maro ary matetika dia mandray ny andraikitry ny mpandala ny aretina. Mety hieritreritra ihany aza ianao amin'ny fantsona mahazatra sy satroka mpihaza.
Toa ahy ihany fa misy radio vaovao, horonantsary na famokarana fahitalavitra miaraka amin'i Sherlock Holmes. Nandritra ny tantara naharitra amam-pirenen'ity toetra ity, mpisehatra maro no namorona ny hevitray momba an'io toetra mahafinaritra io. Ny anjara asan'i Sherlock dia nilalao sarimihetsika toa an'i Robert Downey Jr., Jeremy Brett, Peter Cushing, Orson Welles, Basil Rathbone ary maro hafa. Ny embodiment tsirairay dia nanolotra fanovana kely, fomba fijery vaovao, izay manome antsika fahatakarana bebe kokoa momba ny olona Sherlock Holmes.
Mampatsiahy ahy zavatra iray hitantsika ao amin'ny Baiboly izany - antsoina hoe Evanjely Harmony. Mirakitra filazantsara efatra ny Baiboly. Samy nosoratan'ny mpanoratra hafa - Matthew, Mark, Luke, and John. Tamin'ny alàlan'i Jesosy, ny fiainan'ireto lehilahy ireto dia niova tanteraka (na dia miaraka amin'i Luke, izay tsy nifanena taminy mihitsy aza) ary samy nanoratra ny fitantarany akaiky ny zava-nitranga tamin'ny andron'i Jesosy. Na izany aza, ny tsirairay amin'ireo mpanoratra Evanjely efatra dia samy nanana ny fifantohany, fomba fijery hafa, ary nizara tantara samihafa aza izy ireo izay manampy anay hanazava ny fiainan'i Jesosy. Ny Evanjely anefa tsy misy fehezan-teny mifanohitra momba ny Tompontsika; ny tatitra tsirairay avy dia mifameno ny iray hafa, mifanohana izy ireo ary mifandrindra.
Ny olona dia afaka manana fomba fijery samihafa momba an'i Jesosy; ny sasany amin'izy ireo dia mifanipaka tanteraka. Fa ny fahamarinana mandresy ny fifanolanana toy izany. Karl Barth, teolojika iray tamin'ny taonjato faha-20, fantatra amin'ny asany voalohany an'ny Church Dogmatics, nandinika ireo asa soratra toy ny raharaha Sherlock Holmes - miaraka amin'ny fantsona amin'ny tanana iray ary ny pensilihazo amin'ny lafiny iray. Nanontany ny Baiboly i Barth: Ahoana no ahalalantsika an'Andriamanitra? Nofeheziny fa efa nanome ny valiny Andriamanitra - tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay Teny tonga olombelona. Jesosy dia tena fanambarana avy amin'Andriamanitra. Izy dia rahalahintsika, mpisolo vava antsika, Tompontsika sy Mpanavotra - ary tamin'ny alàlan'ny fahatongavana ho nofo dia nantsoiny tamin'ny Ray isika, izay manolotra antsika ny fitiavany sy ny fahasoavany.
Mpilalao sarimihetsika isan-karazany no nanolotra anay amin'ny sarin'izy ireo momba ny Sherlock Holmes malaza, ny sasany dia nanantitrantitra ny fahaizany famotopotorana, ny hafa kosa ny sainy, ary ny hafa koa ny fitondran-tenany. Ny dikan-tantara rehetra, ny zava-bita rehetra, na amin'ny film na amin'ny radio, dia manampy antsika hahita ny iray na ny toetra iray hafa momba ny Holmes. Betsaka ny fampifanarahana sy dikan-dahatsoratra, saingy miverina amin'ny mpandray anjara lehibe, Sir Arthur Conan Doyle, izy rehetra izay noforonina 100 taona lasa izay. Misy Filazantsara efatra sy boky maro hafa ao amin'ny Baiboly, izay mifantoka amin'ny olona tokana, dia Jesosy, Tompontsika. Tsy toy ny Holmes tsotra fotsiny i Jesosy, fa olona tena iainany. Ireo boky isan-karazany dia nosoratana ho antsika mba ahafahantsika mahazo ny refy samy hafa sy ny hafany.
Raha mikasika ny hafatr'i Jesosy izy, dia hafa noho ny fiankinana ao amin'ny seza fahitalavitra misy kitapo misy ny popcorn ao an-tanako ary mijery ilay horonantsary Sherlock farany. Satria isika dia nantsoina hoe mihoatra ny mpijery fotsiny. Tsy tokony hipetraka amin'ny sezantsika isika ary hijery fotsiny ny fiparitahan'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy takiana ny manadihady tsiambaratelo, fa tokony ho ao anatiny! Te-handeha amin'ny tsiambaratelo ny famonjena isika, ny lalana naseho antsika ary mitondra mankany amin'ny famonjena. Toy ny Dr. Watson dia talanjona ary mijoro ho vavolombelona amin'ny fahefan'i Kristy akaiky. Tena akaiky azy tokoa isika satria zanaka nateraka isika ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra noho ny asa famonjena nataon'i Jesosy sy ny fanorenan'ny fanahiny.
Ao amin'ny GCI / WKG dia mino an'i Jesosy Kristy Tompo, nateraky ny Ray alohan'ny fotoana rehetra isika. Mankasitraka izahay fa Andriamanitra dia mampiseho endrika samihafa amin'ny tantaram-piainan'i Jesosy eto an-tany amin'ny alàlan'ireo mpanoratra efatra ny filazantsara. Nandefa an'i Jesosy Andriamanitra ary nanome antsika koa ny Soratra ara-tsindrimandry, izay ahafahantsika mianatra ny zava-dehibe rehetra momba ny fiainany, ny fahafatesany, ny fitsanganany ary ny fanjakany mahafinaritra. Amin'ny maha-kristiana antsika dia tsy nantsoina hiambina am-pitandremana isika, fa tafiditra ao amin'ny fitoriana ny vaovao tsara momba ny toetran'i Jesosy manerana an'izao tontolo izao - koa ao anatin'izany hetsika izany.
Mankalaza ny lalana sy ny fahamarinana ary ny fiainana isika,